Kumaandooska Somalia iyo ciidamo Mareykan ah oo Al-shabaab kala wareegay Mubaarak… – Hagaag.com
Kumaandooska Somalia iyo ciidamo Mareykan ah oo Al-shabaab kala wareegay Mubaarak…
Posted on 12 Febraayo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Ciidamada Kumandoska Soomaaliya oo ay wehliyaan kuwa Maraykanka ayaa saaka weeraray degaano ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose oo ay maamulayeen Al-Shaabab.
Howlgalladaas ayaa waxaa la sheegay iney ciidamadu kula wareegeen Degaanka Mubaarak ee gobolka Sh/hoose halkaasoo ay gacanta ku hayeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo halkaas isaga baxay iyagoo aan sameynin iska cabin adag.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in xiisado dagaal ay ka jiraan degmada Aw-dheegle oo ay gacanta ku hayaan Al-shabaab, iyadoo ciidamada dowlada iyo kuwa Maraykanka ee taageeraya ay halkaas ku wajahan yihiin.
Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in Al-Shabaab ay goordhow isaga baxeen degaanka Doon-buraale oo hoostaga degmada Qoryooley.
Ciidamada dowlada ayaa la soo sheegayaa iney haatan baaritaano ka wadaan degaanka Mubaarak, iyagoo baadi goobaya xubno ka tirsan Al-shabaab oo ay tuhunsan yihiin iney gudaha degaankaas ku dhuumanayaan.